PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - BAFISA UKULUNGISELELWA INDLELA YOKUNISELA ABALIMI
BAFISA UKULUNGISELELWA INDLELA YOKUNISELA ABALIMI
Ilanga - 2018-11-08 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE
BAFISA ukulungiselwa indlela yokuchelela amasimu abo, ebizwa ngeNkasa Irrigation Scheme, abalimi baseMsinga emuva kokuba injini abayisebenzisa ukudonsa amanzi ikhiphe isidumbu somunye wabo ngeledlule.
Le njini iwele phezu kukaMnu Mzekelwa Ndlovu (57) wagcina eshonile. Ubefihlwa ngempelasonto edlule.
Kuthiwa uMnu Ndlovu ubehamba nabanye abalimi beyokhipha le njini emgodini ongasemfuleni, lapho “itshalwe” khona ukuze izokhandwa, kwazise ibifile.
Ngokusho kukaMnu Sibangani Mpungose, ongumlamu kamufi, uthi sebesaba ngisho ukuya kule njini ukuyoyidumisa emuva kwalesi sigameko.
Echaza ngokwenzekile ngesikhathi kulimala uMnu Ndlovu, uthi kuthe sebeyikhiphile injini emgodini, beyinyusa ngezitebhisi ezehlela lapho igxunyekwe khona, isikumuntu wesine ukusuka esitebhisini sokuqala lapho bekumi khona uMnu Ndlovu, kwavele kwagqashuka ucingo abebeyidonsa ngalo.
“Iphunyuke lapho yehla nomlamu wami yamthela phansi imcindezele. Yize simphuthumise esi- bhedlela kodwa ugcine edlulile emhlabeni. Odokotela bathe ubengeke asinde ngoba ushayeke kabi esifubeni waphuka izimbambo eziwu-10, kwadabuka amaphaphu kwathinteka nenhliziyo,” kusho uMnu Mpungose.
UMfu Barney Mabaso, ongumlimi endaweni futhi obesebenza noMnu Ndlovu, uthi le nkinga ibingeke yenzeke ukuba uhulumeni ubalungisele iNkasa Irrigation Scheme eyakhiwa wuhulumeni wobandlululo ngo-1972, kodwa yamosheka ngesikhathi sezimvula zango-1987.
Uthi ngemuva kwalezo zimvula uhulumeni waKwaZulu wazama ukubadonsela amanzi kabusha ngokufaka ukhonkolo lapho kwakuhamba khona amanzi phansi eya emasimini.
“Ngokuhamba kwesikhathi, amanzi abesebuye ahluphe, angafinyeleli emasimini, Sibe sesizithengela injini edonsa amanzi ngogesi. Kuthe sekungene lo hulumeni okhona manje, wawadonsa kabusha amanzi ngenjini oyimbele phansi emgodini ojulile.
“Sikholwa wukuthi besingekho kwasidingo sokuba kuze kumbelwe injini ngale ndlela, kwazise iyingozi kubantu. Sifisa kuvuselelwe iNkasa Irrigation Scheme ngoba amanzi asengafinyelela emasi- mini uma kungase kulungiswe lapho okwamosha khona izimvula,” kusho uMfu Mabaso.
Uthi ngaphambi kokuba le njini ibulale uMnu Ndlovu, kucishe kwafa omunye wesilisa wakwaMlangeni obeyoyidumisa.
UMnu Ndlovu, obefihlwa, ushiye abantwana abawu-9 okungaziwa ukuthi manje bazophila ngani njengoba bebondliwa nguye ngemali ayithola ngokulima, adayise.
IMenenja kaMasipala wesiFunda uMzinyathi, okuyiwo obhekelele ukuhlinzeka lo mphakathi ngamanzi, uMnu Sipho Ndaba, kayitholakalanga ocingweni lwayo ukuba iphefumule ngalolu daba